စက်တင်ဘာလ 2018 -
Month: စက်တင်ဘာလ 2018
Make your own portable applications. Download Portable ThinApp (eight.1 MB) Download Virtualized ThinApp (ကို MB eight.eight) 1 – Run setup_capture or Setup Seize onaclear Home windows2– Learn fastidiously directions three – Click on on Subsequent Four – GoTo 2
MicroG YouTube ကို Vanced APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
MicroG YouTube ကို Vanced APK ဖိုင် MicroG YouTube ကို Vanced APK ကိုဒေါင်းလုပ်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်: ဟေ့ကောင်တွေ, သငျသညျနောက်ခံပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့် YouTube ပေါ်မှာပိတ်ဆို့ခြင်းကြော်ငြာခွင့်ပြု app များကိုရှာဖွေနေကြသည်? ဒါကြောင့်ပါလျှင်, ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဆင်းသက်ခဲ့ကြ. ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့, ကျနော်တို့သင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်…
VPlayer APK ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
VPlayer APK ဖိုင် VPlayer APK ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်:VPlayer ကိုမဆိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲအားလုံးလူကြိုက်များဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်ကို formats ကိုထောက်ပံ့ပေးသော Android အတွက်တစ်ဗီဒီယို player ဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏အသိဉာဏ် core ကိုနည်းပညာအလိုအလြောကျကဗီဒီယိုကို formats ကို detect, လွယ်ကူသငျသညျချောမွေ့မွေ့လျော်ရန်အဘို့အအောင်, ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကိုကိုဗီဒီယို…
« သြဂုတ် အောက်တိုဘာ »